गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा दाबी गर्दै १५ जनाले दरखास्त दिए
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा दाबी गर्दै १५ जनाले दरखास्त दिएका छन् । बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले कात्तिक २५ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो । दरखास्त दिने अन्तिम म्याद बिहीबारसम्म थियो ।
अध्यक्षका लागि शिक्षा तथा परीक्षाको क्षेत्रमा १२ वर्षको अनुभव भएका र कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्तिले दरखास्त दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रको अनुभव भने पनि प्राध्यापनमा १२ वर्ष बिताएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
बोर्ड अध्यक्ष छनोटका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आयोग अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा प्राध्यापक डा. लेखनाथ शर्मा र मीना गुरुङ सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो ।
सिफारिस समितिका सदस्य प्राध्यापक डा. लेखनाथ शर्माले दरखास्त दिनेहरूको अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको समेत मूल्याङ्कन गरेर छनोटका लागि एक जनाको नाम सरकारलाई बुझाउने नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिसमेत रहनुभएका बताउनुभयो ।